Holland America Line yadzoka mubhizinesi
musha » Dzazvino Nhau Zvinyorwa » Kurwisa » Holland America Line yadzoka mubhizinesi
Kuputsa Nhau dzeEurope • Kuputsa Nhau Dzenyika Dzepasi Pose • Kurwisa • nhau • ushanyi • Kufamba Wire Nhau • USA Kuputsa Nhau
Holland America Line's Nieuw Statendam yakabva kuFort Lauderdale, Florida, nhasi parwendo rwayo rwekutanga kubva indasitiri yakamira gore rapfuura. Ngarava inomaka yechishanu Holland America Line ngarava kupindazve sevhisi, ichibatana neRotterdam, Koningsdam, Eurodam neNieuw Amsterdam.
Kurangarira chiitiko ichi, Holland America Line yakaita mabiko ekucheka ribhoni muchiteshi kuti vavhure chikepe, uye nhengo dzechikwata dzakakwazisa vaenzi neruzha rwekusimudza mureza pavakakwira ngarava. Nieuw Statendam vakatanga kufamba nechikepe mazuva manomwe kumadokero kweCaribbean rwendo rwokushanyira Nassau, Bahamas; Ocho Rios nePort Royal, Jamaica; uye Half Moon Cay, Holland America Line chitsuwa chakazvimiririra muBahamas.
Nieuw Statendam achapedza kubva muna Mbudzi kusvika Kubvumbi muCaribbean parwendo rwekufamba kubva pamazuva manomwe kusvika ku11, rwendo rwese rwekudzokera kubva kuFort Lauderdale's Port Everglades. Vaenzi vari kutsvaga rwendo rurefu rwekuenda vanogona kutanga rwendo rweVateresi - dzakasanganiswa nzira dzekudzokera kumashure dzinopa ongororo yakadzama inofukidza chikamu chimwe chedunhu.
Yese yeCaribbean cruise inosanganisira kufona kuHalf Moon Cay, Holland America Line's inohwina mubairo wepachivande chitsuwa cheBahamian. Iyi inzvimbo inoyevedza yakashanduka kuita nhandare yekutamba yevaenzi vanofamba nechikepe uye ine mahombekombe ejecha jena; dzimba mbiri-nhurikidzwa uye private cabanas; inonaka yekudyira nzvimbo seLobster Shack; nzvimbo yemvura yevana; uye rwendo rwakasiyana-siyana rwakazadzwa nemufaro kune vanoda zvisikwa, vafambi vane ruzivo uye vanoongorora.
Holland America Line yanga ichienda kumba kubva kuPort Everglades kubvira kuma1990. Nekushanda, kushanya kwega kwega kwechikepe kunopa madhora mazana matatu nemakumi matanhatu nemazana mana zvakananga kuhupfumi hwenzvimbo mukupa (mafuta, chikafu, maruva, piano tuning, zvekushandisa, nezvimwewo), mutero wechiteshi uye kushandisa. Holland America Line inoshanda nevanosvika zana vekuSouth Florida vatengesi vanopa kambani nengarava dzayo zvinhu nemasevhisi.
Kwemakore ese, Holland America Line yanga ichibatanidzwa nemasangano anopfuura makumi matatu asingabatsiri muSouth Florida kuburikidza nekupa, mabiko echikepe, uye zvipo zvekufamba nechikepe, kusanganisira Seafarers 'House, Henderson Behavioral Health, Coast Guard Women's Leadership Initiative, Symphony of the Americas, The Opera Society nezvimwe.